युवतीहरु किन क्रेजी हुन्छन् अनमोलसँग ? - Himalayan Kangaroo
युवतीहरु किन क्रेजी हुन्छन् अनमोलसँग ?
Posted by Himalayan Kangaroo | २६ माघ २०७४, शुक्रबार ०३:१० |
नेपाली फिल्मका लागि अनमोल केसी अहिलेका सर्वाधिक स्टार भ्यालु बोकेका हिरो हुन् । त्यसो हुनुमा उनलाई चर्को रुचाउने फ्यान र खासगरी युवती जमात कारक छन् । आजको कान्तिपुरमा यो खबर छापिएको छ ।
उनले भने, रोमान्स फिल्मा नै गरिरहेको छु । रियल लाइफमा खासै मौका पाएको छैन । व्यस्त पनि भइरहेको छु । आशा गरौं, आफूले सोचेजस्तो केटी छिट्टै पाउँ ।
तर, अनमोल भने प्रेमको मामिलामा केही अनुदार सुनिए । लभलाई चाइनिज मोबाइलसँग तुलना गर्दै उनी भन्छन्, जसको कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन । छिट्टै फुट्न पनि सक्छ । जे पनि हुन सक्छ ।
‘पहिले त उनको फिल्मले गर्दा नै युवतीहरु अनमोलसँग आकर्षित भएका होलान् । योङ, क्युट लुक्सअ चकलेटी देखेर पनि हुन सक्छ । अनी जसले उसलाई भेट्छन्, उसले गर्ने बानी, ब्यवहार देखेर पनि मन पराउँछन् । मलाई पनि उनको मुहारले भन्दा पनि यही बानी बेहोराका कारण उ मन पर्छ ।’ -अदिती बुढाथोकी
‘अनमोल स्क्रिनमा गजब राम्रो देखिन्छन् अनि उनको स्माइलमा पनि फिदा भएका हुन सक्छन् । अभिनयका हिसाबले अनमोलले आफूलाई सुधार गरेर लगेका छन् । मलाई उनको एकदम शालीन अनि अरुलाई सम्मानको दृष्टिले हेर्ने खालको स्वभाव भएको लाग्छ ।’ -केकी अकिारी
‘आकर्षक व्यक्तित्वका कारण अनमोल बढी ह्यान्डसम मानिएका हुन् । उनको लुक्सका कारणले नै मुख्यतः युवतीहरु उनीप्रति क्रेजी भएको हो जस्तो लाग्छ । अग्लो कद, कोरियन लुक्स र राम्रो ड्रेसअप सेन्स अनमोलमा जतिको अरुमा कमै छ । व्यक्तिगत रुपमा मलाई अनमोल सबैलाई सम्मान गर्ने र कडा मिहिनेत गर्ने मान्छे लाग्छ ।’ -बेनिशा हमाल
Previousचार जहाज उडाउन दुई जना पाइलट
Nextभ्यालेन्टाइन डेको लागि विशेष बन्न सक्ने दस रोमान्टिक फिल्म
धेरै सेक्सी भएका कारण यी अभिनेत्रीलाई फिल्म खेल्न प्रतिबन्ध
२६ कार्तिक २०७४, आईतवार १०:५७
संसारकै सुन्दर बालिका, जो मोडलिंग समेत गर्छिन्
१३ मंसिर २०७४, बुधबार ०४:५९
अन्तरिक्षमा पोर्न फिल्म खिच्ने तयारी
२९ जेष्ठ २०७२, शुक्रबार ०८:१७